General Galaal oo shalay Muqdisho soo gaaray, kagana sii gudbay gobollada dhexe oo hadda uu kaga sugan yahay degmada Guriceel. | Halganka Online
General Galaal oo shalay Muqdisho soo gaaray, kagana sii gudbay gobollada dhexe oo hadda uu kaga sugan yahay degmada Guriceel.
General Max’ed Nuur Galaal oo ah masuulka lacagaha Qubuura Galeenka kaga soo uruuriya reer galbeedka lehna fekerka dagaalkooda gobollada dhexe ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoona uu kaga sii gudbay dhanka gobollada dhexe.
Ilo wareed ayaa u sheegay SomaliMeMo in General Galaal uu garoonka diyaaradaha Muqdisho kula kulmay saraakiil katirsan Waaxda Sirdoonka Mareykanka ee Xalane ku sugan iyo saraakiil kale oo aan la ogaan, kuwaasi oo uu warbixin ka siiyay qorshayaalka dagaalka gobollada dhexe iyo arrimo uu halkaasi kaso xalinayo.
Wararku waxa nagu soo gaareen in Galaal uu isla markiiba ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho isagoo kusii jeeda magaalada Gaalgacyo halkaasi oo uu kasoo galay magaalada Guriceel oo hadda la sheegayo in uu ku sugan yahay.
Dad badan ayaa rumeysan Generaalkaasi Cuttiga ah in uu isku xire weyn u ahaa mashruuca Qubuura Galeenka ay ka wadaan gobollada dhexe isla markaana uu dhaqaale iyo hub kaga soo qaado dawladaha caalamka ee neceb Islaamiyiinta Somaliya, iyadoona hadda la sheegayo in arrimo taagan dartood uu u yimid.
Ilo wareedyada aan ka helnay xogtan ayaa sheegaya in Galaal uu doonayo dhameynta khilaafaad halis ah oo soo kala dhexgalay Qubuura Galeenka iyo beelihii taageerayay ee deegaanka kuwaasi oo bilaabay qaarkood heshiisyo nabadeed in ay la galaa Al-Shabaab halka kuwa kale ay diideen dagaalka ay caruurtooda ku dhamaadeen ee natiijada aaney ka heyn.
Dagaalki bishii Hore ay Dhuusamareeb ku galeen Ciidamada Al-Shabaab iyo kii Qubuura Galeenka looga eryay Baladweyne ayaa sii cakiriyay xaaladda waxaana cabsi xoogan laga qabaa in beelaha la duuban maleeshiyadaasi ay ka haraan, taasi oo keeni doonta inay heli waayaan deegaano ay gabbaad ka dhigtaan.
General Max’ed Nuur Galaal iyo shaqsiyaad kale oo DKMG ah hore ula soo shaqeeyay ayaa dibadda ka maleega qorshayaalka Qubuura Galeenka, waxaana laga wadaa Galaal dib in uu ugu laabto Nairobi marka uu arrimahaasi dhameeyo.
« Maleeshiyadii Xadka Kenya la dhigay oo dhaq dhaqaaq billowday iyo xukuumadda Kenya oo ra’yul caamka marin habaabineysa. Wasiir beeraha qaabilsan oo Howlgal Milatari sheegay kuna dhaartay Cudada Ciidamada AMISOM. »